Umkhuleko oya eSan Roque.? Ongcwele ngezikhathi zobhadane.
Umkhuleko kuSan Roque Kuyisikhali esinamandla kubo bonke abadinga ukungenela kwaphezulu ezimweni ezithile ezingase ziphakame empilweni, kungaba ngokuqondile noma ngokungaqondile.
Amandla yemikhuleko akunakulinganiswa, ngabo singazuza ukunqoba obekungenakwenzeka ukuthi sinqobe.
Isidingo kuphela sokuthi umthandazo usebenze kahle ukukwenza ngokukholwa, ngeke samane sawucela, kodwa sikwenze ngokukholwa ngokusuka enhliziyweni, ngendlela eqotho futhi eqinisekile ukuthi impendulo esiyicelile kangaka inganikezwa.
USan Roque njengomnakekeli othembekile wabantu abadinga usizo angakuqonda ukuhlupheka kwethu uma ehlushwa yisiphi isifo.
Masisebenzise leli thuluzi futhi sithandaze ukuthi lezo zimangaliso esizidingayo kangaka sizonikezwa zona ngesikhathi esifanele sikaNkulunkulu uYise uMdali.
1 Ukuthandaza kuSan Roque Ngubani uSan Roque?
1.1 Umkhuleko kumlandeli weSan Roque wezilwane (elahlekile)
1.2 Umthandazo weSan Roque wezinja ezigulayo
3 Ingabe le ngcwele inamandla?
Ukuthandaza kuSan Roque Ngubani uSan Roque?
Indaba le isitshela ukuthi wayeyindodana yombusi waseMontepelfer futhi wazalwa ngonyaka ka-1378. Impilo yakhe yayijwayelekile futhi lapho eneminyaka engama-20, abazali bakhe bashona.
Njengoba eyintandane esencane, uRoque wazinakekela ekunakekeleni abagulayo kwesinye sezilokazane ezihlukumeza kakhulu ezake zahlaselwa ngaleso sikhathi.
Indaba ibhekisisa nokuthi, ngesikhathi enakekela lezi ziguli, abaningi babethola ukwelashwa okuphelele nangokuyisimangaliso lapho uSan Roque emenza isiphambano ebunzini lakhe.
Lokhu akumangazi ngoba emibhalweni engcwele siyabona ukuthi ukuphulukiswa kungadluliselwa ngisho nangesithunzi, njengoba kwenzeka ku umphostoli uPhetro.
Ngakho-ke, iqiniso lokuthi umuntu angakhonza ukuphulukiswa ngesibonakaliso sesiphambano kuphela isenzo esingasikholelwa njengesimangaliso esivela ngokuqondile kuNkulunkulu.
Usuku lwakhe lugujwa njalo ngo-Agasti 16.
Umkhuleko kumlandeli weSan Roque wezilwane (elahlekile)
Unesihe Somusa Roque,
umuhle, unesihe futhi uyisimangaliso
ukuthi uzinikele umzimba nomphefumulo kuBaba wethu uNkulunkulu
futhi wazithanda izilwane ngokusuka enhliziyweni
ngakho-ke ungumlandeli wakhe okhazimulayo,
ungabashiyi ngaphandle kosizo lapho beludinga
ungazivumeli ukuba zizizwe zingasizi lapho zibhekene nobunzima
futhi ubanikeze konke abakudingayo ukuze okuhle bakuphile.
Thandaza eNkosini ubusise futhi ubusise uFranchesca
futhi uyigcine impilo yakhe yonke ngaphansi kokuvikelwa nokugcinwa kwakho.
Ungomunye welungu lomndeni,
Ungumngane wami nomngane wami,
Nguye onginikeza uthando lwakhe ngaphandle kwemibandela,
Uthembekile futhi uyangiduduza futhi wenza izinsuku zami zijabule
futhi kunginikeza okungaphezulu kakhulu kwalokho okutholayo.
USanta Roque, inceku yeNkosi ethandekayo, ekhazimulayo,
ukuthi usizwe ngokuyisimangaliso ngumdlwane
lapho abantu bekuyeka ngenxa yokugula kwakho,
ngokwethembekile ukulethela ama-rolls nsuku zonke
nangothando lick izilonda zakho ukudambisa izinhlungu zakho,
ngakho-ke ungumvikeli wezilwane ezifuywayo,
Namuhla ngiza kuwe ngigcwele ukuzethemba
nokwazi ukuthi ulungile futhi unomusa
Ngikuphathisa isilwanyane sami uFranchesca.
USan Roque Wezimangaliso, umvikeli wazo zonke izilwane,
Namuhla ngiza kuwe ukuzongisiza osizini lwami,
Sebenzisa amandla akho okulamula phambi kukaNkulunkulu
ukuze ngomusa wakhe angisondeze
Engikucelayo enhliziyweni yami ngesifuyo sami:
Vikela yena ukuze ajabule ngaso sonke isikhathi,
bukela uFranchesca wami othandekayo
ukuthi akanakho ukudla, awukho umbhede, awanankampani, awekho imidlalo,
umvikele kukho konke okubi, kukho konke ukulimaza nesimo esibi;
Ungalokothi udabuke noma uzizwe ulahliwe
ungalokothi uswele uthando, ukunakekelwa kanye nobungani
ukuze angaze azizwe esaba, esaba, noma enesizungu,
njalo phathwa ngothando nenhlonipho
ukuze uphile ugcwele injabulo nenhlala-kahle
futhi ube nempilo ende futhi ejabulisayo.
Ngiyakubuza, ubusiswe uSanta Roque ngempilo yakho,
kude nezifo zeFranchesca,
ngokuzethemba okukhulu nangokukholwa, ngiyishiya ezandleni zakho,
kumenze alulame ngokushesha namandla akhe
ukuze angabe esahlupheka,
ungamvumeli ahlupheke noma ezwe izinhlungu,
Ukwehla ukuhlupheka kwakho, welapha amanxeba akho noma ukugula.
Ngiyalwazisa usizo lwakho kulezi zikhathi ezinzima,
Ngiyazi ukuthi ngeke uyeke ukuvikela nokunakekela iFranchesca
nokuthi uthatha izicelo zami eNkosini,
owadala zonke izidalwa ezihlala emhlabeni
futhi ngothando nangomusa, unakekela futhi anakekele zonke izidalwa zakhe.
Ngakho-ke makube njalo.
Ungumvikeli wezifo ezihlukunyezwa yizinkomo, izinja, abantu abakhubazekile, ubhubhane kanye nobunye ubunzima ngokuya ngempilo yabantu nezilwane.
ISonto lamaKhatholika lenze umkhuleko noma imodeli yomkhuleko ofanele kulezi zimo lapho kuyizilwane ezihlupheka futhi ezidinga isimangaliso saphezulu sokuphiliswa.
Ukwenza lomkhuleko akudingekile ukulungiselela umkhathi, yize ungakhanyisa amanye amakhandlela noma wenze i-altare elikhethekile lale ngcwele.
Ungathandaza wedwa noma njengomndeni, okudingekayo futhi okufanele kugcinwe ngaso sonke isikhathi ukholo.
Umthandazo weSan Roque wezinja ezigulayo
Ongcwele, ongcwele, osize iziguli eziningi ezihlupha, uSaint Roque, othe, ngenxa yesihe sikaNkulunkulu, wenza izimangaliso, abakholelwa kuye emandleni akho okuphulukisa ...
Ngiyakuncenga, ngokuzithoba okuqotho, ngisize ngisindise inja yami nomngane othembekile, ______, kulesi sifo, esimenze waba buthakathaka kakhulu, wenza, waphakanyiswa futhi wazwela usanta ...
San Roque, ukuthi ubewathanda kakhulu izinja, kangangokuba inja yami iyaphilisa futhi igijime futhi ijabule njengangaphambili.
Izinja nazo ziyindalo kaNkulunkulu futhi zifanelwe ukunakwa nokunakekelwa kwethu.
Ngesikhathi isilwane sethu sidlula isikhathi esinzima sempilo singaphakamisa umthandazo kuSan Roque ukuthi sinakekele isilwane simnikeze isimangaliso sokuphulukiswa.
Futhi singacela lezo zilwane ezigula emigwaqweni ukuze le ngcwele enomusa futhi eyisimangaliso ibanikeze impilo nokunakekelwa abakudingayo.
Isikhathi esihle sokuthandaza siku- uzizwe unesidingo sokukwenza.
Izwi likaNkulunkulu likhuluma nathi ngomkhuleko futhi lisitshela ukuthi, noma nini lapho sidinga usizo, uBaba osezulwini uhlala ezimisele ukulalela imithandazo yethu.
Lapho-ke singakuqonda ukuthi asikho isimiso esithile yize abanye beluleka ngokwenza njalo. ekuseni kanye neqembu lomndeniIqiniso ngukuthi lingenziwa nganoma yisiphi isikhathi futhi kunoma iyiphi indawo.
Ingabe le ngcwele inamandla?
Yebo, ngoba ngenkathi esaphila yena uqobo wahlushwa isifo esifanayo nalabo ababenakekela futhi ngokushesha ngemuva kwalokho walashwa futhi waqhubeka nokunakekela iziguli eziningi ezibhedlela ezahlukahlukene.
Kusukela ngaleso sikhathi kuze kube namuhla uyakholelwa emandleni akhe ayisimangaliso okusiza abanconyelwayo.
Thandaza umkhuleko ku-San Roque umlandeli wezilwane ezilahlekile nezigulayo ezinokholo olukhulu.
Thandaza futhi lomkhuleko onamandla
Umkhuleko onamandla kakhulu kuSanta uMichael Ingelosi enkulu
Umkhuleko kuSan Alejo nsuku zonke